घरवालाको मनपरी, बसवालाको अटेरी कहिलेसम्म ?
परिवर्तनका संवाहक, वर्तमानका साझेदार अनि भविष्यका कर्णधार भनेकै विद्यार्थी हुन् । जसरी एउटा मुर्ति वा भाँडाको पहिलो रुप काँचो माटो हो । त्यसरी नै आजका विद्यार्थी देश निर्माण गर्ने भोलीका जनशक्ति हुन् । सृजनात्मक, प्रतिफल केन्द्रित परिवर्तन आवश्यकता महशुस गर्ने र त्यसलाई पूरा गर्न आँधीबेरी सृजना गर्ने कार्य विद्यार्थीबाट सफल भएको इतिहास जिवित नै छ । चाहे राष्ट्रियताको विषयमा...
समृद्धिका आधार र नायकत्वको प्रश्न
भनिन्छ नीतिको पनि नीति राजनीति हो । अर्थात् राजनीति देशको मुल नीति हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पुर्वाधार विकास लगाएत सबै क्षेत्रलाई बाटो देखाउने काम राजनीतिले गर्छ । त्यसैले कुनै पनि क्षेत्रको प्रगति वा अवनतिको कारक राजनीति हो । सहि राजनीतिले देशलाई अग्रगतिमा लैजान्छ तर राजनीति ठिक बाटोबाट हिड्न सकेन भने देशले दुरगामि क्षति बेहोर्नुपर्छ । ईतिहासले देखाउछ, राजनीतिलाई कुन...
नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान
अर्थतन्त्र निष्कृय भएको समयमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गतिविधीमा अलिकती पनि विचलन नआउनुले नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि वित्तीय क्षेत्रको अतुलनीय योगदान रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । देशको संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा रहेको वित्तीय क्षेत्रको समग्र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको भूमिका अर्थतन्त्रलाई क्रियाशिल बनाउन, देशमा उपलब्ध साधन र स्रोत को उचित परिचालन गर्न...
संसारकै प्रभावशाली लगानीकर्ता ज्याक बोगलबाट सिक्नुपर्ने सूत्र
संसारकै एक ठूला र प्रभावशाली लगानीकर्ताका रूपमा चिनिने ज्याक बोगलको हालै ८९ वर्ष उमेरमा निधन भएको छ। उनी क्यान्सरका बिरामी थिए। उनी संसारकै दोस्रो ठूलो म्युचुअल फन्ड कम्पनी ‘भ्यानगार्ड’ का संस्थापक हुन्। सन् १९९६ सम्म भ्यानगार्ड समूहका प्रमुख कार्यकारी र २००० सम्म अध्यक्षका रूपमा कार्यरत थिए। निधनपछि उनका काम, उपलब्धि र योगदानबारे संसारभरि चर्चा-परिचर्चा छ। बोगलको नवीन सोच र कामले...
नेपाली कूटनीति फेरि संवेदनशील मोडमा
नेपालको कूटनीति फेरि एउटा संवेदनशील र महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ। हाम्रो आफ्नै आन्तरिक मामलामा भएको विकास र विश्व संरचनामा भइरहेका पछिल्ला परिवर्तनले आगामी दिनमा निकै सुझबुझ र सावधानीपूर्वक परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ। जुन कुराको अहिलेको नेतृत्वमा अभाव देखिएको छ। यसअघि पनि नेपालको कूटनीतिमा दुई पटक यस्ता संवेदनशील मोड आएका थिए जसलाई हामीले निकै सफलतापूर्वक पार गरेका थियौं।...
पौषशुक्ल पूर्णिमादेखि घर घरमा स्वस्थानी व्रतकथा वाचन तथा श्रवण गर्ने क्रम चलिरहेको छ। त्यही स्वस्थानी व्रतकथाका विभिन्न प्रसंगलाई लिएर आलोचना गर्नेहरूले ‘अहिलेको समयअनुसार अव्यावहारिक व्रत’, ‘महिला हिंसा गर्न उक्साउने ग्रन्थ’ जस्ता टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। अझ कतिपयले त स्वस्थानीलाई आधार बनाएर समग्र सनातन धर्ममाथि नै आक्षेप लगाउने गरेका छन्। कतिपयले कथाको वास्तविक अर्थ नबुझी आक्षेप लगाउने गरेका छन् भने...
छाया सरकार संसदीय व्यवस्थाको आभूषण
कुनै पनि विम्बको प्रतिविम्ब हुन्छ । प्रतिविम्बले विम्बको आकृति र प्रकृतिलाई चित्रित गर्दछ । यो शाश्वत सत्य हो । तर यस सत्यलाई दृष्टान्तस्वरूप अन्यत्र कतै प्रयोग गरियो भने त्यसले भिन्न यथार्थ झल्किन्छ । राजनीतिक वृत्तमा प्रयोग हुने एउटा शब्द यसै कुरासँग प्रासाङ्गिक छ । संसदीय प्रणालीमा सरकारको प्रतिविम्बका रूपमा ‘छाया सरकार’को पनि अस्तित्व भेटिन्छ । संसदीय पद्धति भनेकै सरकार...
रंगशालालाई चन्दा कि सेयर?
चन्दा उठाएर रंगशाला निर्माण गर्ने कुरा त्यति नै अस्वीकार्य छ जति सेयर जारी गरेर रंगशाला बनाउने कार्य हुनेछ । धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले भरतपुरमा निर्माण गर्न लागेको भनिएको ‘सिद्धार्थ गौतम क्रिकेट रंगशाला’ चन्दाको भरमा बन्नुपर्ने संरचना होइन । चन्दाको विकल्पमा चर्चामा ल्याइएको निजी क्षेत्रको संलग्नता पनिे उपभोक्तावादी पुँजीवादको सबैभन्दा ठूलो हस्तक्षेप हो । हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि पुँजीवादले हाम्रो अभिव्यक्तिको...
<< Older 123 4